Kely fohy - classic, malalaka, mahitsy, culottes, klesh, misy tavy, kiraro, kiraro, ho feno
Kely fohy - iza no mandeha, inona no tokony hatao, ahoana no hamoronana sary hoso-doko?
Ny fiverimberenana ho an'ny fehiloha lava dia maneho fa ny retro dia matoky tanteraka ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fiaran-dàlan'ny Style 80, raha te-hientan-dry zareo ianao amin'ny lohataona sy ny lohataona - sahy manangona zavatra roa avy amin'ny fitaovana rehetra, dia ny loko, denim, corduroy, kavona, kavina na vatosoa, ary manandrama amin'ny sary.
Hatsikana kely 2018
Monochrome ary misy pataloha mainty matevina, miankina amin'ny endrika sy lamba, - safidy amin'ny fotoana rehetra. Ny sokajy henjana dia safidy lehibe ho an'ny birao, kulettes vaovao, felana sy vokatra miaraka amin'ny amboadia, flounces sy ny tiroida avy amin'ny fitaovana mandroso amin'ny designer decor and glitter - fotony tsara ho an'ny fialantsasatra. Mendri-panajana foana: Modely hoditr'ondry sy kiraro, fehin-kiraro sy fialan-tsiny: sipa biker sy "sigara" kely. Ny lamaody malaza: tranom-borona matevina sy malalaka, tranom-bahiny Scottish sy tongotra, ahitra ary môtô mavokely, embryon-drakitra sy fantsona mifanohitra amin'ny lafiny.
Inona no lokon'ireo pataloha fohy amin'ny fangatahana avo lenta eo amin'ny vehivavy mijery ny lamaody? Ao amin'ny tampon'ny laza, tsy hoe pantalon mainty sy fotsy manerantany fotsiny ihany, fa zavatra koa amin'ny tonon-kiraro mena, maitso, manga, mavo, mavo ary kaki. Jeans amin'ny alokaloky ny saka, loko maitso ary kafe, ny felana pataloha amin'ny manga, beige, milky fotsy sy poti-tonony.
Ny pataloha fohy ho an'ny vehivavy
Ny fehin-kiraro fohy ho an'ny vehivavy dia manana loko 7/8, 3/4, 1 cm eo ho eo amin'ny kiraron'ny kiraro, heverina ho birao, ary capri, ary modely maro samihafa no afaka manome fahafinaretana na dia tsara aza. Ao anatin'ireo akanjom-boninahitra maingoka-pataloha, zavatra lavalava sy niparitaka, tery kely sy mahazatra. Fitsangatsanganana mega - elefanta mirefotra miaraka amin'ny rambony eo ambany elatry ny pataloha sy ny protectorina amin'ny tendan'akanjo, pataloha maromaro amin'ny andry sy tadidy isan-karazany.
Ankoatra ny vahaolana iray loko, mahaliana ny endriky ny pataloha misy famolavolana mamorona:
Tendrombohitra tokana sy kely ary tokonam-baravarankely sy felana, fohy sy lava lava;
manapaka ny eo anoloana, ny andaniny sy ny andaniny, ny akora avy amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny teboka boribory sy ny laharana;
asymmetrie amin'ny fametahana, ny tendrony ambony sy ny fehikibo;
karazana lamaody isan-karazany: floral and floral, abstract and geometric, snake and predatory;
fanasan-damba mifanohitra amina loko sy malefaka.
Miorina amin'ny endriky ny akanjon'ny vehivavy Anglisy, ny pataloha fohy dia manana ny refy, matevina na kely miovaova, matevina avy amin'ny fitaovana tsotra monotony na lamba vita amin'ny fôtôlônôma nentim-paharazana. Ireo no safidy tsara indrindra ahafahana manangana tsangambato tsy manam-paharoa, satria ny zana-tsipika farafahakeliny azo atao amin'ny zipo, toy ny zana-tsipìka, ny fihenam-bidy ary ny satroka manasongadina ny tavy. Ny loko azo ekena amin'ny birao: mena, fotsy, mainty, manga ary mainty.
Ireo mpitarika mpiompy dia mihevitra fa ny pataloha tsy misy loko mivadika amin'ny endrika mivantana dia hitondra ny karazana efa nandrasana hatry ny ela ho an'ny fiainana andavanandro na dia ireo vehivavy izay manana fehezan-dalàna hentitra aza ao amin'ny orinasa. Sewn avy amin'ny seho an-tsena - velvet sy panbarhat, satroka ary satin, miaraka amin'ny firavaka tany am-boalohany, dia ho lasa fotony tsara ho an'ny ampakarin'ny mpivady hariva. Mods, izay tia ny fampiononana tanteraka, dia omena "akondro" vita amin'ny hoditra marina sy jeans miaraka amin'ny felana avy amin'ny tavy. Amin'ny lohataona, tsy misy pentina volo fohy sy vahaolana vita amin'ny lamba rongony na kodiarana.
Natolotr'ireo mpanangom-bokin'ny lamaody maoderina, pantalôkôlà fohy toy ny akanjom-boninkazo, tsy misy na inona na inona ny tranon'izy ireo na nidina an-dalambe - mpitarika tsy azo lavina amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona amin'ny lohataona.
Fomban-dabozia tsy mahazatra amin'ny fofona sy fehikibo marefo izay manasongadina ny tadim-pirahalahiana, mihantona amin'ny koketa mivaingana izay manomboka ny fipoahana lehibe avy amin'ny hip.
Vetivety ny pataloha asymmetric, plastika, ary ny kilasy avy amin'ny karazana avy any Chanel.
Fehikibo-akanjo maromaro miaraka amin'ny zana-tsipìka, ary misy fehikibo vita amin'ny fingadana vita amin'ny gidro na kofehy mena, izay manome tombony amin'ny fehikibony.
Nohazavaina ny pataloha
Ity mozika ankehitriny ity - kiraro fohy no nirohotra niaraka tamin'ny hitsikera roa indray mandeha: ny taolam-paty tamin'ireo taona 70 sy ny halavan'ny 80 taona. Ireo mpaka sary maoderina izay efa zatra tahaka ny tsikera farany dia tsy ho diso hevitra raha mihaino ny versione vita amin'ny hoditra avy amin'ny hip, ny pataloha miaraka amin'ny flounces sy ny amboadia, izay misy tsipika mipoitra avy amin'ny lohalika, ary ny jeans mifangaro. Ny vaovao avy any Haute Couture dia capri sy culottes an-kalamanjana ao amin'ny palette manankarena, fehin-tanana lava vita amin'ny glossy dantelina sy lamba malefaka, tsara indrindra ho an'ny famoronana maro samihafa amin'ny fijery manjavozavo.
Kely fohy mitaingina
Ankoatra ny fironana nandritra ny taona vitsy lasa izay dia nisy ny fehiloha fohy tamin'ny lava-bao, izay somary mendri-kaja sy mety amin'ny endrika hafa. Ao amin'ny modely matevina sy tery, ny fitsangatsanganana tafahoatra dia mampitombo ny fitomboana sy ny tsy fahampiana, ary amin'ny pataloha, felam-patana sy culottes, dia tsy vitan'ny mamorona lantona amin'ny tavy fotsiny ihany, fa koa hanesorana ireo fahadisoana madinika ao amin'ny vatany, miafina ny moron-tongotra na ny fahafenoan'ny tongotra. Classics miaraka amin'ny fitongilanana avo, na amin'ny hatsiaka na amin'ny fahavaratra - ny safidy tsara sy azo antoka ho an'ny birao misy fitsipika hentitra.
Hatsipaka fohy miaraka amin'ny tady
Ny lamaody maoderina dia miavaka amin'ny toetrany demaokratika, ary ny pataloha mainty hoditra misy tsiran-kevitra mifanohitra aminy dia efa ela no lasa lavitra noho ireo zavatra fototra ara-panatanjahantena. Ny pataloha maivana amin'ny kapoka amin'ny vanim-potoana vaovao dia ho singa tena tsara ho an'ny fananganana sary samihafa fanandramana an-tanandehibe an-tanandehibe, ary ao amin'ny modely maoderina ireo mpanamboatra lamaody izay nanolo-kevitra ny hanolo ny tovovavy nentim-paharazana nentim-paharazana amin'ny sotrokely madinika na mena midina amin'ny sisiny ary mandroso.
Hatsikana fohy ho an'ny vehivavy matavy
Iza no nanapa-kevitra fa niparitaka ny pataloha mangalatra sy mahitsy tsy mifanaraka amin'ny hatsaran-tarehy tsara tarehy? Raha afaka mamantatra ny tampony ianao, dia afaka mahazo sary tsy manam-paharoa sy mahafinaritra, toy izany koa mety hivoaka sy hanao akanjo isan'andro. Stylists manoro hevitra:
Manambatra ny pataloha fohy miaraka amin'ny akanjo lava sy ny akanjony mifanakaiky, ny akanjony, ny T-shirts ary ny kiraro;
Manamboatra ny akanjo mofomamy amin'ny akanjom-boninahitra na blouson ho an'ny famotsorana sy ny pataloha, jaketa miaraka amin'ny lobaka na akanjo sy kiraro.
Ny "Stylish" dia "fitafy" maro be, izay ahitana kiraro na turtlenecks ho an'ny volombava volomparasy, antsasaky ny amboadia, akanjo, akanjo sy akanjom-bolo ary fohy ny lava- pandriana na dia efa malaza sy mihintsy aza. Ireo manam-pahaizana momba ny Fashion dia tsy manoro vehivavy amin'ny endrika kanto mba hitafy "elefanta" sy pataloha mifangaro miaraka amin'ny tendron-tery, nipetrapetraka tao anaty pataloha.
Mamaly ny fanontaniana amin'ny akanjo fohy, ny mpanao lalàna dia manolotra karazan-javatra maro samihafa avy amin'ny karazana akanjo goavam-be sy marevaka amin'ny bibikely kofehy sy pataloha fohy. Zava-tsarobidy ho an'ny famoronana sary tsy mipetaka amin'ny poti-pahefana kiraro fohy dia ho karavasy sy akanjo eo ambany jirobe-coho, mpanamory fiaramanidina sy baomba, antsasaky ny akanjo ary outerwear an'ny vehivavy. Tsy lavitra ny akanjom-behivavy samihafa, craps sy ponchos, kiraro ary kofehy matanjaka sy mahaleo telo.
Amin'ny ririnina, ny pataloha amperinasa dia mifanentana tanteraka amin'ny akanjo, akanjo lava, akanjo hoditra ary akanjo fohy, na ela, na midi ary mini. Ny lohataona sy ny lohataona dia feno karazany, mamela ny hatsaratsarana tanora sy malefaka ho an'ny tsikombakomba mafy, ohatra, ny pataloha, ny ambony, ary ny crochet-top, ny vehivavy amin'ny olon-dehibe - mifanandratra amin'ny fomba fotsin'ny Frantsay, mitambatra ny T-shirt tsara sy ny akanjony, ny jirokely ary ny mpanafika amin'ny kyulotes sy nirehitra.
Sary miaraka amin'ny pataloha fohy
Tanàna mahafinaritra an-tanan-dehibe: kofehy marevaka isan-karazany amin'ny endrika samihafa ary mifanaraka tsara amin'ny singa hafa amin'ny antokon'olona manontolo. Noho izany, ho an'ny kyulotam sy ny modely nirongatra, miankina amin'ny akora, fitafy blouses, T-shirts, tops, manao akanjo lava na mametraka azy ireo ambony. Ny pantyhose flannel, manaloka sy ny tendany eo amin'ny andilany, miaraka amin'ny akanjo lava lava, ary vahaolana vahaolana tsy misy akanjo. Sary halavam-bolo avo lenta: pataloha misy akanjo sy akanjo amin'ny baskety.
Ny lohataona amin'ny hoavy dia tsy ho mendri-kaja, na dia amin'ny volom-pitiavana aza, raha maka akanjo lava fehiloha na palitao ara-miaramila ianao na akanjom-bolo mipetrapetraka na tokana miavosa miaraka amina kofehy manodidin-dandy ka hatrany amin'ny afovoan'ny shank sy ny pataloha fohy izay tianao. Amin'izany fotoana izany, esory ny sary miaraka amin'ny fitaovana mamirapiratra sy tany am-boalohany amin'ny endriky ny kitapo tsy misy trivialina sy ny mofomamy maoderina. Efa misy ankehitriny - ny zavatra rehetra eo amin'ny hoditra, na loko iray, tsipìka mahazatra maromaro mahazatra ao amin'ny akorandriaka amam-bika sy glumor grunge: kavina voadidy vita amin'ny hoditra, toy ny sweater sy scoop na "pilot".
Karazana kiraro manao akanjo fohy ve?
Na inona na inona fomba fanao ary fetezana, ny pataloha kiraro amin'ny kiraro araka ny stylists - ny fampifangaroana tsara indrindra amin'ny fararano-ririnina. Miankina tanteraka amin'ny tanjon'ny sary nofinidy amin'ny pataloha toy izany, ny kiraro rehetra avy amin'ny retro lavalava amin'ny laces sy ny kiraro amin'ny hazo eny an-dalambe sy ny baoty miaramila dia mifanaraka tanteraka. Eo ambanin'ireo sigara "sigara" sy ny jeans amin'ny fotoana samihafa: ny kozaka, ny kiraro ho an'ny firenena miaraka amin'ny satrin'ny ombilahy.
Sary nalaina amin'ny pataloha fohy
Ny toetra demôkratika amin'ny fironana lamaody lehibe dia tsara satria tsy misy olona mandrara ny mamorona sary tsy manam-paharoa sy manandrana singa misy tongolobe iraisana. Noho izany, manaova kiraro mahasalama ho anao amin'ny fehiloha fohy: kiraro kiraro, kiraro mahazatra, kiraro, kiraro, kiraro, kiraro ambany na plastika ary kofehy, na dia misy kiraro aza ary matevina amin'ny tongotra. Ny tsikera tokana dia ny firindran'ny ankapobeny ny antokon'olona mitambatra, ka ny singa tsirairay dia manantitrantitra ny fahatsinjovana araka izay tratra ary, amin'ny ankapobeny, dia mamela ny hijery zato isan-jato.
Tendroka maingoka amin'ny pataloha fohy
Iza ireo pataloa fohy?
Ny pataloha fohy 3/4 dia tsara ho an'ny vehivavy mama sy mavomavo, ny hatsaran'ny fahanteran'ny taona mijery kokoa ny modely amin'ny birao lava 7/8 na chinos. Ireo vahaolana ireo dia mifanaraka amin'ny kiraro avo, ny kodiarana sy ny sehatra mahazatra, ny fitambaran-javatra mitovy amin'izany ary mampitombo ny fitomboany. Ho an'ny vehivavy sy tovovavy ambany, araka ny stylists, dia tokony handinika tsara ny fehin-tanana efa voafafa fohy miaraka amin'ny tebitrefitra tondraka, fa raha tianao ny odi-katsaka na ny felana, dia mila ny Accessories, tsara tarehy ambony sy kiraro.
Ireo tompon'antoka ara-pahaizan'ny karazana mpanao lalàna dia tsy misafidy ny hisafidy pataloha henjana sy fihantsiana ambany, ary tsara kokoa ny manolotra fialana laconic miaraka amin'ny firavaka kely. Vahaolana mivantana sy malefaka, pataloha eo amin'ny kofehy na kiraro ny akanjo lava malalaka, na ny akanjon'ny mpivarotra, dia safidy tsara mandritra ny fotoana maro, na amin'ny fiainana andavanandro, na amin'ny takariva sy amin'ny fialantsasatra "fanao".
Ny pataloha fohy no fototry ny lamaody
Corset taorian'ny fiterahana
Satelika akanjo maromaro
Ny ririnina dia mametraka ny vehivavy - jirobe sy pataloha
Syndrome de hyperandrogenism amin'ny vehivavy
Toeran'ny kafe ho an'ny tarehy
Manao akanjo lava amin'ny akanjo lava lava
Ahoana ny fandroahana alika amin'ny kiraro gnaw?
Dingana famolavolana ny psyche
Tsy misy fisalasalana: 7 fepetra fisorohana mandritra ny valan'aretina VIH
Zana-ketsa tsy misy tavy
Inona no eritreretin'ny kodiarana mainty?
Ny famantarana - ny mpitsikilo dia mamely ilay olona
Ny kavin'aretin'ny vehivavy
Serum miaraka amin'ny hyaluronic asidra
Sharko Shower mamafa
Ny aretin-tsakafo - mampidi-doza ny manimba, ary ny fomba hisorohana ny fahasarotana?